An'arivony maro no tafahitsoka satria manafoana sidina efa ho 300 ny Spirit Airlines
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » An'arivony maro no tafahitsoka satria manafoana sidina efa ho 300 ny Spirit Airlines
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Nofoanan'ny American Airlines ihany koa ny sidina 500 mahery ary 782 hafa no nahemotra noho ny oram-baratra tamin'ny faran'ny herinandro sy ny “fanambin'ny asa.”
Mpandeha tafahitsoka tao amin'ny seranam-piaramanidina Fort Lauderdale, Miami, Houston ary San Juan.
Nofoanan'ny Spirit Airlines ny sidina 261 androany.
Spirit Airlines nanemotra sidina 120 androany.
Mpandeha an'arivony no tafahitsoka androany tao amin'ny seranam-piaramanidina ao Fort Lauderdale, Miami, Houston, ary San Juan any Puerto Rico, taorian'ny Orinasa fiaramanidina fanahyNofoanana na ahemotra sidina efa ho 300.
Araka ny fanambaran'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, “andiana toetr'andro sy fanamby eo amin'ny asa” no niteraka fikorontanana tamin'ny dia.
Notaterin'ny mpandeha ny ora fiandrasana ho an'ny famerenam-bola sy fanampiana mpanjifa hafa any amin'ny seranam-piaramanidina. Nisy mpitsangantsangana sendra nitoby.
Ny Association of Flight Attendants-CWA dia namoaka fanambarana, nilaza fa ny "fandaharam-potoana miova volana," ary ny fahatapahana IT, miaraka amin'ny toetr'andro, dia mety nahatonga ny fianjeran'i Spirit Airlines.
Ny mpitatitra amerikana dia nitolona tamin'ny fitazonana ny haavon'ny mpiasa taorian'ny tombotsoan'ny COVID-19.
Nanafoanana sidina 261 ny Florida-based Spirit Airlines ary 120 ny sidina nahemotra ny alatsinainy hatramin'ny 2:30 hariva ET.
Raha ny fahitana azy dia lavitra ny fiaramanidina tokana niady tolona omaly sy anio ny Spirit Airlines.
American Airlines nofoanana ihany koa ny sidina 500 mahery ary 782 hafa no nahemotra noho ny oram-baratra tamin'ny faran'ny herinandro sy ny “fanambin'ny asa.”